အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: မုန့်ဟင်းခါး နဲ့ သူငယ်ချင်းများ
အဲ့တာနဲ့ တိုင်ပင်ကြတော့ လွယ်ကူစားမြန်ကလဲ သူတချို့တဝက် လုပ်ယူလာမယ်တဲ့ အဲ့တာနဲ့ အီးမေးလ် တစောင်ပို့လာပါတယ်။ ချက်နည်းကို အခြေခံယူတာကတော့ ဝတ်ရည်ဆီကပါပဲ။ ရှု...........
1. မုန့်ဟင်းခါး ဖတ်
6. ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ ဆီချက်
7. ငါးခူ ၁ ကီလို
ရန်။ စားမကောင်း တီချမ်း မကြိုက်) အိုကေ။ ဆက်......
Posted by တီချမ်း at 4:59 PM
You really should writeacooking book with step by step illustrations, you haveareally good writing skill with great sense of humor
တီချမ်း February 20, 2012 at 1:37 PM
thanks i do haveaplan to publishacooking book by T chen wait for it OK?
How can i sleep after reading your special MOONGAR post at almost midnight:(
တီချမ်း February 20, 2012 at 1:38 PM
luzoe ma gyi GYI DAW
come and eat in the dream LOL
Want to try your 'Kyaing Tone Daw Chan' Mon hin gha. Look nice!
တီချမ်း February 20, 2012 at 1:39 PM
come eat when i really openashop
Appreciate your both cooking and writing style!
“အပြောကြီးသော နိုင်ငံကျော်ဘလောခ်ဂါ ကျိုင်းတုံ ဒေါ်ချမ်း”ရဲ့မုန့်ပာင်းခါးကိုစားခြင်လိုက်တာပာယ်။တို့ကမုန့်ပာင်းခါးဆိုသိပ်ကြိုက်တာနေ့တိုင်းစားလဲမမုန်းဘူး။ချက်တဲ့နေ့ဆိုထမင်းလွတ်စားတာ။ပြီးတော့ဆိုင်ချက်တွေကခိုတော့စားမကောင်းလို့အိမ်မှာဘဲချက်စားတယ်။ငှက်ပြောအူလေးနဲ့အီကြာကွေးလေးလဲပါသေး။
“အပြောကြီးသော နိုင်ငံကျော်ဘလောခ်ဂါ ကျိုင်းတုံ ဒေါ်ချမ်း”ရဲ့မုန့်ပာင်းခါးကိုစားခြင်လိုက်တာပာယ်။တို့ကမုန့်ပာင်းခါးဆိုသိပ်ကြိုက်တာနေ့တိုင်းစားလဲမမုန်းဘူး။ချက်တဲ့နေ့ဆိုထမင်းလွတ်စားတာ။ပြီးတော့ဆိုင်ချက်တွေကခိုတော့စားမကောင်းလို့အိမ်မှာဘဲချက်စားတယ်။ငှက်ပြောအူလေးနဲ့အီကြာကွေးလေးလဲပါသေး။မြကျေး
တီချမ်း February 20, 2012 at 6:53 PM
ဒေါ်မြကျေးရယ် တခါ ပြောရင် ရပါပြီ ဟိဟိဟိ
တကယ်ကို စားကောင်းတာ နောက်နေ့ကျတော့ ဟင်းရည်က ကျသွားတော့ ပိုတောင် ကောင်းသေး
အီကြာကွေးလေးနဲ့အိုးကြက်ဥလေးနဲ့ အဓိကကတော့ ငှက်ပျောအူတွေ တော်တော်ကိုနုတယ် အိုအိရှိပဲ
ဟုတ်ပါ. အပြောတော်တော်ကြီးတာ အခု တီချမ်းကိုယ်တိုင်ပြောမှ ဘဲ သတိရတော.တယ်။ အဲ.လိုခေါ်ဖို.။
အပြောတော်တော်ကြီးသော ကြီးတော် တီချမ်း။
မုန်.ဟင်းခါးကြည်.ရတာ ပါးစပ်ထဲက သွားရေတွေထွက်လာတယ်။
တီချမ်း February 20, 2012 at 6:54 PM
တကယ်ကို ဂွတ်တာ အနောရဲ့
ဟုတ်တယ် ချက်နေမကျဘူး သို့သော် ချက်လိုက်တော့လဲ ဖြစ်သွားတာပဲ
ဒါ ဒုတိယ တခေါက်ပဲ ရှိသေးတယ် ချက်တာ
ကြာဇံချက်တွေဘာတွေလဲ တခါပဲ ချက်ဘူးတယ် ဒီည ကျ နန်းကြီး သုပ်မယ်
Vista February 20, 2012 at 4:14 PM
အပြောကြီးသော တီချမ်း ရဲ့ မွင်းဂါးကို သရည်ကျသွားပါကြောင်း ငှက်ပြောအူလေးတွေ နုလိုက်တာ
တီချမ်း February 20, 2012 at 7:40 PM
တီချမ်း February 21, 2012 at 2:34 PM
အရမ်းကို တော်တာဘဲ တီရယ်
တီချမ်း February 22, 2012 at 12:50 AM
အဲလက်စ် ရဲ့ ငါမင်းကိုသတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သီချင်းကို ဆိုရမလိုပဲ
ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်မှာ သူ့ဘလော့ကဟင်းတွေကို ကြည့်မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်မတင်ချင်တော့